လွယ်လွယ်လေးပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » လွယ်လွယ်လေးပါ။
Posted by ကထူးဆန်း on Dec 9, 2011 in Myanmar Gazette, Think Different | 16 comments
လူ နဲ့ မှု ။
ကြက်ဥ နဲ့ ကြက် ဘယ်သူက အစလည်း ဆိုတာလို ကျွန်တော်တို့ အမြဲတန်း ငြင်းကြတယ်လေ။
လူမကောင်းလို့ မူမကောင်းတာ ဆိုသလို မူမကောင်းလို့ လူမကောင်း ဆိုပြီး။
ဘယ်သူမှန်လည်း ဘယ်သူမှားလည်း တော့ ပြောရတော့ ခက်ပါတယ်။
လူတွေ စည်းကမ်းမရှိလို့ ဥပဒေ မစိုးမိုးနိုင် ၊ ဥပဒေ မစိုးမိုးနိုင်လို့ လူတွေ စည်းကမ်းပျက် စသဖြင့် စသဖြင့် ..
၀ိုင်းကြီးပါတ်ပါတ် လည် နေကြပါတယ်။ ဖြေရှငိးရ ခက်လှပါတယ်။
အဲ အစဉ်ပြေအောင် ကြည့်ရှင်းလိုက်တာတွေလည်း အများကြီး ။
ကျွန်တော် မနက်တိုင်း ရုံးလာရင် ပြည်လမ်း က ဖြတ် ရပါတယ်။ ပြည်လမ်း ကမာရွတ် ဘက်ကနေ မြို့ထဲဘက်ကို ဦးတည်ရတာပါ။
နာနတ်တော မီးပွိုင့် ကျော်လာပြီးရင် အရင် ဆေး(၁) ရှေ့နားမှာ လူကူးမျဉ်းကြားတစ်ခု ၊ တီတီစီ အ၀င်ပေါက်နား၊ အသံလွှင့်ရုံ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် နား မရောက်ခင် လေးမှာ လူကူးမျဉ်းကြား တစ်ခု၊ စုစုပေါင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။
တီတီစီ အ၀င် က ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်နဲ့ နီးတာရယ် ၊ တီတီစီ ထဲဝင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ရယ် ၊ အင်းယားလမ်းဘက်ကို ဖြတ်ဝင်ပြီး အလုပ်ဆင်းသူတွေများတာရယ် ကြောင့် ကျေုာင်းမတက်မှီ အချိန်ဆို လမ်းပြရဲမေ နှစ်ဦးနဲ့ လမ်းပြရဲ အရာရှိ တစ်ဦးရယ်က အမြဲတန်းလိုလို စောင့်ကြပ်ပြီး ကား တွေကို ရပ် ခိုင်း လူတွေကို လူကူးမျဉ်းကြားကနေ ကားလမ်းကူးစေပါတယ်။
ဆေး(၁) ရှေ့ကတော့ ကားလမ်းကူးသူနည်းပါတယ်။ လမ်းပြ ရဲမရှိတော့ ကားတွေက မရပ်ပေးတော့ ကူးသူတွေ ခမျာ အပြေးအလွှား ကူးရပါတယ်။
လမ်းပြရဲမေ တွေ ရှိတဲ့ မျဉ်းကြား ကတော့ ကားတွေ မရပ်မနေ ရပ်ပေးရတော့ လူတွေ က အေးအေးဆေးဆေး အန္တရယ်ရှင်းရှင်း အိနြေ္ဒ ရရ ကူးကြရပါတယ် ။
သူတို့ရှိတဲ့ အချိန်ဆို ကားလမ်းလုမောင်းလေ့ ရှိတဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေလည်း အဲ့ဒီ့နားမှာ အတွင်းလမ်းပြန်ဝင်ပြီး မောင်းကြ ၊ ကားမှတ်တိုင်မှာ ရပ်ကြပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ အဲ့ဒီ့ရဲမေ တွေလမ်းပြလေ့ရှိတဲ့ တီတီစီ ရှေ့က လူကူးမျဉ်းကြား မရှိတော့ပါဘူး ။ အဲ့ဒီ့ အပေါ်ကနေ ကတ္တရာ တွေအုပ်ခင်းလိုက်ပြီး မျဉ်းကြားကိုတော့ ရှေ့ ခပ်လှမ်းလှမ်း ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် အကျော်လေး ကို ရွှေ့ပြီး အသစ်ပြန်ဆွဲထားပါတယ် ။ အဓိက ရွှေ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ဂျန်ရှင်း နာနာတော ဆောက်တဲ့ အထဲ ၀င် ဖို့ လမ်း အသစ်ဖောက်ရာမှာ အ၀င်လမ်းနဲ့ မျဉ်းကြားနဲ့ သိပ် ကပ်သွားတဲ့ အတွက် ဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။
ကားမောင်းတဲ့သူတွေဘက်က ကြည့်ရင်တော့ အဲ့ဒီလို ရွှေ့လိုက်တာ ပိုကောင်းသွားပါတယ် ။ မှတ်တိုင် အကျော် မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် ဘတ်စ်ကားစီးသူတွေ ကား အတက် အဆင်း ကို ယခင် လူတွေ ဖြတ်ကူးလို့ ကားခဏ ရပ်စဉ် မှာ အတက် အဆင်း လုပ်လို့ မရတော့ ဟိုနား ဒီနားက ဖြတ်တာတွေ သက်သာသွားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ်စ်ကား တွေ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ကျမှ ရပ်ပြီး အတက် အဆင်းပြု စေကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ ဘတ်စ်ကားစီး လာပြီး ကျောင်းတက်သူ ၊ တီတီစီ ဘေးက ကားလမ်းထဲဝင်ပြီး အင်းယားလမ်းဘက် ဖြတ်သူများအတွက်တော့ ရှေ့နဲနဲသွား ပြီးမှ နောက်ပြန်လျှောက်နဲ့ လမ်းနဲနဲ ပို လျှောက်စေရပါတယ် ။
လူကူးမျဉ်းကြားကြီး ရွှေ့ ပြီးပြီဆိုတော့ လမ်းပြ ရဲမေများနှင့် ရဲ အရာကြီးတို့ လည်း လူကူးမျဉ်းကြား အသစ်နေရာဘက် ရွှေ့လို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြ တာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ ပြသနာ စတော့ တာပါဘဲဗျာ ။
မူ အသစ် အနေနဲ့ လူကူးမျဉ်းကြား အသစ်နေရာ ရှိနေပါပြီ။ သို့သော် လူတွေကတော့ မှု မပြောင်းဘူးခင်ဗျ ။ လူအများစု က
အရင်လိုဘဲ အရင် မျဉ်းကြားမရှိတော့တဲ့ မျဉ်းကြားဟောင်း နေရာ ကသာ ဖြတ်ကြပါတယ် ။
ထုံးစံ အတိုင်း မျုဉ်းကြားပေါ်က လူကူးရင်တောင် ကားတွေက ရပ်မပေးချင်တာ မျဉ်းကြားမရှိတဲ့ နေရာ ကလာ ဖြတ်တော့ ကားတွေက ဘယ်ရပ်ပေးပါ့မလဲ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းက မျဉ်းကြားသစ်ပေါ်က ရဲမေတို့ကတော့ စည်းကမ်းလိုက်နာသူ ဖြတ်ကူးသူ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ အတွက် ကားတွေကို ရပ်ခိုင်း လူတွေကူးခိုင်းပေါ့ ။ အဲ့ဒီ့ အချိ်န် ကားတွေ ရပ်ပြီး နှေးသွားပြီဆို ဒီဘက် အဟောင်းနေရာက လူအများစုကလည်း ကူးကြပေါ့။ ပိုလို့ ရှုပ်ယှက်ခတ်ကုန် ပါတယ် ။
ရဲမေတွေ ကလည်း တာဝန်ကျေစွာနဲံ့ လူတွေ အန္တရာယ်မရှိအောင် လူကူးမျဉ်းကြားကနေ ကူးနိုင်အောင်ကျောင်းဖွင့်တဲ့နေ့တိုင်း လက်ပြပေးနေပါတယ် ။ များသော အားဖြင့် မျဉ်းကြား ကူးသူ တစ်ဦး နှစ်ဦးပေါ့။ ရပ်နေရတာကတော့ပိုများပါတယ်။ ကူးသူမရှိလို့။ မူလ နေရာက ဘဲ လူတွေက ကူးကြပါတယ် .
(၁)စည်းကမ်းမဲ့ ကူးကြတဲ့ လူတွေကို ဖမ်း(သို့) လမ်းညွှန်ပြီး စည်းကမ်းတကျ နဲ့ လူကူးမျဉ်းကြားက ကူးခိုင်းမလားးးးးးး
(၂) လူတွေ စည်းကမ်းရှိလာပြီး အန္တရယ်ကင်းကင်းနဲ့ ဖြတ်လို့ရတဲ့ ရဲမေတွေ ရှိတဲ့ လူကူးမျဉ်းကြားကို သွားဖြတ်ကြမလားးးးးးးးးးးးး
(၃) အဲ့ဒီလိုဘဲ အန္တရယ် ကြားကနေဘဲ လူတွေက မျဉ်းကြားကို မသွားဘဲ နေရာဟောင်းကဘဲ ဆက်ကူးနေကြမလားးးးးးးးးးးး
ကျွန်တော် ကတော့ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲ စိတ်ဝင်စားနေတာပေါ့။ ဘယ်လိုဖြေရှင်း ကြမလဲပေါ့။
ရဲမေတွေက နေရာ ပြန်ရွှေ့လာပြီး လူကူးမျဉ်းကြား မရှိတော့တဲ့ မျဉ်းကြားဟောင်း နေရာမှာ လမ်းပြန်ပြပေးနေပါတယ်။ လူတွေလည်း အရင် လိုဘဲ ဖြတ်သန်းကြပါတယ်။
မလှမ်းမကမ်းက လူကူးမျဉ်းကြား ကတော့ ဖြတ်သူ မရှိပေါ့။
သာမာန် ကြည့်ရင်တော့…………..အားလုံးအစဉ်ပြေသွား တာပါဘဲ။ လွယ်လွယ်လေးပါ။
ကျွန်တော့ စိတ်ထဲမှာတော့ …………… ကူးသူမရှိတဲ့ လူကူးမျဉ်းကြားရယ် ၊ မျဉ်းကြားမရှိတဲ့နေရာမှာ လမ်းကူးနေသူများနဲ့ လမ်းပြပေးနေတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲများရယ်နဲ့…
လူတွေဘာကြောင့် အဲဒီနေရာကို အသုံးများရသလဲ၊ ဘာကြောင်မစွန့်နိုင်ရသလဲ တချက်လေ့လာကြည့်ဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်။ တောင်ကြီးက မိုဟာမက်ဆီ မလာနိုင်ရင် မိုဟာမက်က တောင်ကြီးထံသွားတယ်ဆိုတာ (စကားပုံ အစစ်ကို သေချာမသိပါဘူး။ အရင်ကတော့ အပျော်သဘော ပြောင်းပြန်ဟာသလုပ် ပြောခဲ့ပါတယ်) စေ့စေ့စပ်စပ်တွေးရင် အဓိပ္ပါယ် အများကြီး ရှိပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဥပဒေ အမိန့် မထုတ်ပြန်နဲ့၊ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရင်လည်း လိုက်နာနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်ဆိုတာပါ။ ဒါကို ရေဗူးပေါက်တာ မလိုချင် ရေပါတာပဲ လိုချင်တဲ့ စစ်ဗိုလ်များ တလွဲတွေးတော့ အားလုံးဒုက္ခ ရောက်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံများရဲ့ ဥပဒေစီရင်ထုံး အပြောင်းအလဲများ၊ လူနေမှုစနစ်သစ်ပုံစံတို့ဟာ ယဉ်ကျေးတဲ့ကမ္ဘာမှာ အတင်းအကြပ် အင်အားသုံး လိုက်နာခိုင်းဖို့မသင့်၊ အများနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်အပေါ် အခြေခံတယ်ထင်ပါတယ်။ ကောင်းတာရှိသလို ဆိုးတာလည်းရှိပေမဲ့ ကမ္ဘာကို သူတို့ ဦးဆောင်နေတာ ငြင်းမရပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဥပဒေစည်းကမ်းဆိုတာ လူတွေကို မလှုပ်နိုင်အောင် ကြပ်မတ်ထားတယ်ဆိုတာထက် လူတွေကို လှုပ်သာလွန့်သာရှိအောင် စီမံပေးထားတာလို အမြင်သစ်နဲ့ မြင်ကြည့်နိုင်ရင် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အသစ်အသစ်များ ထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။။။။
သေချာတာတစ်ခုက ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထို်င်သူအများစုက
အပြောင်းအလဲ အသစ်တစ်ခုကို လွယ်လွယ်နဲ့လက်မခံတတ်ကြပါဘူး။
ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး အဟောင်းကိုဘဲဖက်တွယ်လို့ နေကြတာများပါတယ်။
အပြောင်းအလဲ အသစ်တစ်ခုကို လွယ်လွယ်နဲ့လက်မခံတတ်ဘူး ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလမ်းကူးတာကြီးက ငယ်ငယ်ကတည်းက တီဗီတွေမှာ ခဏခဏ ပညာပေး အစီအစဉ်တွေ တွေ့ ဖူးပါတယ်။ ခေါင်းထဲမှာတော့ သိကြတယ် လူကူးမျဉ်းကြားက ကူးရမှန်း။ ဒါမေမယ့် မလိုက်နာကြဘူး အလွယ်ပဲ ကူးတာတွေတွေ့ ရတယ်။ ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ် မလိုက်နာကြဘူးဗျ။ နောက်ကနေ လိုက်ထိန်းကျောင်းပေး နေရတယ်။ မလိုက်နာတဲ့သူကို ကိုပေ ပြောသလို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူနိုင်ရင် ကောင်းမယ်။ အဲဒါမှ မြန်မာနိုင်ငံကြီး စည်းကမ်းရှိလာမှာ။ ခုဟာက မြန်မာနိုင်ငံက သူများနိုင်ငံတွေနဲ့ယှဉ်ရင် စည်းကမ်းမရှိဘူးဗျ၊ သိသာတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ဦးကြောင်၊ ရေဗူးပေါက်တာ မလို ရေပါတာဘဲ လိုချင်တယ် ဆိုတာ တစ်ခါတစ်ရံ (သို့) ရေတို မှာ အောင်မြင်နိုင်ပေမဲ့ ရေရှည်မှာ မအောင်မြင်န်ိုင်ပါဘူး။ ဥပဒေ ကို လိုက်နာ အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း လည်း လာတ်စားမှု့ ၊ သနားမူ့ ၊ အားနာမှု့ ဆိုတာ ကြီး ရှိနေတော့ အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းနဲ နေပါသေးတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ ခောတ် နောက်ကျ ကျန်ရစ်နေတဲ့ အထဲမှာ ကိုပေါက်ပြောသလို အပြောင်းအလဲ ကို လူ့ သဘာဝ အလျှောက် လက်မခံချင်တာလည်း ပါပါတယ်။
ET တို့ သင်္ဘောသီးတွေ အနေနဲ့ စည်းကမ်းရှိသော တိုင်းပြည် တွေ ရောက်သလို စည်းကမ်းမရှိတဲ့ အာဖရိက က တိုင်းပြည်တွေလည်း ရောက်မှာ ပါ ။ ကိုယ် ကိုယ်နှိုက်ကော အဲ့ဒီ လိုနိုင်ငံတွေ ရောက်တော့ ဘယ်လို ကျင့်ကြံလာလည်း။ စည်းကမ်းရှိတဲ့တိုင်းပြည် ရောက်တော့ စည်းကမ်းရှိရတော့တာဘဲ မဟုတ်လား။ စည်းကမ်းမရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ရောက်တော့ စည်းကမ်းမရှိသလို နေလိုက်ကြတယ်တာဘဲ လေ။
ဒါကို ကြည့်ရင် တကယ်တော့ ပြုပြင် ယူလို့ ရပါတယ် ။ အမှန်က တော့ ET နဲ့ ကိုပေ ပြောတဲ့ ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမှု့ လိုအပ်နေတာပါ။
စင်္ကာပူကို Fine City (Fine =penalty city) လို့ နောက်ခေါ်ကြသလိုပေါ့။ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမူ့ ရှိနေတဲ့ အတွက် စည်းကမ်းရှိတဲ့ တိုင်းပြည် ဖြစ်လာတယ် ။
ဟုတ်တယ် လေးပေါက်ပြောသလိုပါပဲ မြန်မာ တွေရဲ့ အကျင့်ကိုက အဟောင်းကို နှစ်သက်တတ်ပြီး အသစ်ပြောင်းလဲရမှာကို ဘာကြောင့်မှန်းမသိ လုံးဝမကြိုက်ကြပါဘူး…
ဒါပေမဲ့ သူများလို ဖြစ်ချင်ရင်တော့ သူများလိုပဲ ပြင်ကြရမှာပါ
ကိုထုးဆန်း မန္တလေးသာလာလို့ ကတော့ လမ်းမတွေပေါ် ကြည့်ပြီး မျက်ဖြူစိုက်သွားလောက်ပါတယ်….
အခုနေနေကျ လူတောင် လူရှုပ်ရင် မမောင်းရဲလောက်အောင်ကို ဖြစ်နေပြီ
ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုတွေများ စည်းကမ်းလုပ်ပေးပြီး ဘယ်လိုတွေ လိုက်နာကြမလဲ ဆိုတာ အရမ်းကို သိချင်နေပါတယ်
သဂျီးပြောသလို အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တယားနဲ့ ထိန်းကျောင်းသင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပြုပြင်ရေးကို ဂွင်ဖန်ရေးနဲ့ အစားထိုးမှာတော့ ကြောက်မိသား…. :green:
ငါပြောသလိုလုဎ် ငါလုဎ်သလိုမလုဎ်နဲ့ဆိုတာ မြန်မာပြည်ရဲ့ဥပဒေ ကို ရွှေဉဏ်တော် စူးရောက်သူများ ပြထဏ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်(ဒီလိုပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေပါတယ်)
pooch ရေ .မန္တလေးရောက်ရင် ကျွန်တော် ဂါထာ တစ်ခု အမြဲမပြတ် ရွတ်ပြီး လိုက်နာ ပြီး မှ လမ်းကူးတယ်ဗျ။ အခုထိတော့ အန္တာရယ်ကင်းသေးတယ် ။
အဲ့ဒီ့ဂါထာ က ” ဘယ်ကြည့် ညာကြည့် ။ ဘယ်ပြန်ကြည့် ညာပြန်ကြည့်။ ဘယ်ကြည့် ညာကြည့် ။ ဘယ်ပြန်ကြည့် ညာပြန်ကြည့်။ ရှေ့နောက် အားလုံးကြည့် ပြေး ” :grin: :grin:
မမရေ။။ ဂွင်ဖန်ရေးအောက် လည်းသေချာပေါက်ရောက်မှာဘဲ။ အဲ့ဒါမျိုးဆို ဘယ်လိုရောက်အောင်လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ရွှေဥာဏ်တော် အလွန်စူးရောက် ကြတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ မတူတော့တာတော့ မန္တလေးဂေဇက် တို့ မျက်နှာ စာအုပ်ကြီးတို့ ရှိလာတော့ လျှော့ကျလာဖို့များလာပါပြီ.. (မျှော်လင့်မိတာ) :grin:
ကိုအောင်ရေ . ဥပဒေ အထက်မှာ ရှိနေသူတွေ ရှိနေသေး သရွေ့တော့နဲ့ လူကိုခင်ရင် မူကိုပြင်နိုင်သရွေ့တော့ …..
စကာင်္ပူမှာတော့ အခု ရှိသေးလားတော့မသိဘူး .. အရင်တုန်းက အမှိုက်စည်းကမ်းမဲ့ ပစ်တာမိရင် Correction ဆိုတဲ့ အင်္ကျီဝတ်ခိုင်းပြီး ပန်းခြံတွေမှာ အမှိုက်လှဲ ခိုင်း ။ TV ကနေ ရိုက်ပြီး ပြန်လွှင့်ပြတယ်လေ။ ကိုပေရေ ဒီမှာတော့ TV မှာ ပါအောင်ဆိုပြီး အမိူက်ပိုပစ်ကြမလားမသိဘူး .. :grin:
Harumotoေ၇၊ အဲ့ဒိ ကျရင်လည်း ကားသမားများပို သောင်းကြမ်းလာမှာ စိုးရသေးတယ်ဗျ။ ဥပဒေ တစ်ခုဆို သေချာ စမ်းစစ်ပြီးမှ ထုတ်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
မဝေရေ .. ရဲမေတွေက အေးဆေးဘဲ ( ကျွန်တော့် အပြင်က အမြင်နော်. သူတို့စိတ်ထဲ ဘယ်လို၇ှိသလဲတော့ မမေးကြည့်တော့မသိဘူးနော်) ..မူလ နေရာဟောင်း ပြန်ပြောင်းပြီး
မျဉ်းကြားမရှိတဲ့ နေရာမှာဘဲ လက်ပြနေကြတယ်။
လ ကြတ်သွားလို့ ရွှေပါတ်လေးနဲ့ လောကစည်းစိမ်ခံစားနေတုန်း မမြင်ရတော့လို့ မီးဒုတ်ရိူ့မလုိ့လား တပ်မ၇၇ ရဲ့။ :grin:
အဲဒီ မျဉ်းကြားမရှိတော့တဲ့ နေရာကနေ ကူးနေတဲ့ လူအားလုံးကို ဖမ်းပြီး ၊ တစ်ပါတ်လောက် ပရဟိတတွေမှာ သန့် ရှင်းရေး လုပ်အားပေးခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကော ဗျာ
ဥပဒေလေးဘဲ နဲနဲ ပြင်ပေးလိုက်ပါ…
လူကူးမျဉ်းကြား က မကူးတဲ့သူတွေ..
လူသွားစင်္ကြံ(ပလက်ဖေါင်း)က မလျှောက်ဘဲ ကားလမ်းပေါ်ကလျှောက်သူတွေ…
အာမခံ လျှော်ကြေး မပေးဘို့.ပြောပါ..
လူကူးမျဉ်းကြားပေါ်နှင့် လူသွားစင်္ကြံပေါ် မဟုတ်ဘဲ မော်တော်ကား လမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်တိုက်မှု
ဖြစ်ပါက တိုက်မိသော မော်တော်ယာဉ်နှင့် ယာဉ်မောင်း တွင် တာဝန်မရှိ အပြစ် မရှိ စေရ… ဟု
ဥပဒေကို ပြင်ပေးလိုက်ပါ..ဒါဆို လွယ်လွယ်လေး ဖြစ်သွားမှာပါ..
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ လမ်းပေါ် တက်မလျှောက် ရဲဘူး..ဖြစ်သွားမှာ….
ကျွန်မသာ ရဲမေနေရာမှာဆိုရင် ငါရူးတော့မယ် သူငယ်ချင်း လို့ပဲ အော်လိုက်ချင်ပါတော့တယ် …
မီးဒုတ် လို့အော်လိုက်ရမလား
ဖမ်းတော့လည်း ဖမ်းတဲ့လူကို သောက်မြင်ကတ်ကြတယ်ဗျ။
လှည်းတန်းမှာ အရင်က ဖမ်းတာပဲ။
ရဲကလိုက်ရင် ပြေးတဲ့လူလွတ်အောင် ဘေးကလူတွေက ၀ိုင်းကူညီကြတယ်ဗျာ။
“အများပြည်သူ သဘောမတူတဲ့ အမိန့်အာဏာ ဟူသမျှ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ..”ဆိုတာ.. တကယ်တော့.. ဒီမိုကရေစီကိုရည်ညွှန်းပြဆိုတာပဲ..။
အဲဒါကို.. NLD ကထုတ်ခဲ့တာ..။ အဲဒီတုံးက တပ်မတော်အစိုးရက.. အမိန့်တွေထုတ်အုပ်ချုပ်ရတော့..”အမိန့်အာဏာ ဟူသမျှ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ..” လေးပဲဖြတ်ကြည့်ပြီး.. ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဆိုပြီး.. ထိပ်တိုက်ပြန်ချရင်း… နှစ်၂၀ကုန်သွားတယ်ဆိုပါစို့..။
လူအများစုက..အဆင်မပြေရင်.. အဲဒီထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေကို…ပြန်ပြင်ခိုင်းရတယ်..။ ဥပဒေပြုသူတွေကလည်း.. ရွေးကောက်ထားတဲ့..ပြည်သူထဲကလာတဲ့.. လွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တာမို့.. သူမဲရဖို့(ပြန်ရွေးခံရဖို့)..လူထုအများစု(မဲဆန္ဒရှင်)တွေနဲ့..လိုက်ညှိလုပ်တယ်..။
အပေါ်က..ဥပမာမှာ.. မျဉ်းကြားက.. လူတွေအများစုနဲ့အဆင်အပြေဆုံးနေရာကိုထားရမှာပါ..။
အဆင်အပြေဆုံးဆိုတာမှာ.. အသက်ဘေးအနည်းဆုံးလည်းဖြစ်ရမှာပေါ့..။ဒါကလည်း.. မတော်တဆဖြစ်မှုတွေ..နှစ်အလိုက်မှတ်တမ်းထားရင်.. ဥပဒေပြုသူတွေကို.. အချက်အလက်နဲ့ထောက်ပြပြောလို့လွယ်တာပေါ့..။
မတော်တဆမှုတွေတားဆီးရာမှာ.. အရေးအကြီးဆုံးကတော့.. အာမခံပဲ..။
ကားတွေ..လူတွေမှာ..အာမခံရှိရင်.. အာမခံဌာနဆိုတာက.. ဥပဒေနဲ့လိုက်ညှိတာမို့..
ဥပမာ.. မျဉ်းကြားထားတာ.. အဲဒီကမကူးပဲ.. တခြားနေရာကကူးလို့.. ထိခိုက်အသက်ဆုံးရင်.. အာမခံက မလျှော်ပေးဘူးပဲ..။ ဆိုတော့.. စည်းကမ်းဥပဒေအတိုင်းလူက လုပ်ဖြစ်သွားတယ်…
ကြက်ဥနဲ့…ကြက်မမှာ.. ကြက်မက အရင်တဲ့..
Published July 14, 2010| The Sun
Read more: http://www.foxnews.com/scitech/2010/07/14/chicken-egg-mystery-finally-cracked/#ixzz1gDt123Bq
Chicken and egg ကတော့သိပ်မယုံချင်ဘူး သူကြီး ရေ။ သူတို့လည်းနံမည်ကျော်ချင်တာနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ဖြီးတတ်တော့ …
လောလောဆယ်တော့ လူကိုတိုက်ရင် ကားသမား အပြစ်ဘဲ။ မလိုက်နိုင်လို့ကတော့ သေရင် ထောင်ထဲဝင်ဘဲ။ သေသူ ဆွေမျိုးကြေအေး ပေးအောင်လို့ ပေးပေတော့ဘဲ။ ကြေအေးပေးရင်တောင်မှ ထောင် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ဘဲ။ လိုက်နိုင်ရင်တော့ မကျဘူး။ မထားမနေရ အာမခံ ထားရပေမဲ့ ဘယ်သူမှ claim မလုပ်နိုင်ပါဘူး ။ မသေလည်း အမှု မလုပ်အောင် ပေးရ အတောင်းခံကြရတာ။
ဦးဘလက်ရေ.. ဒါကြောင့်လည်း သံသရာတွေ လည်ပြီး ဒီလောက ကကျွန်တော်တို့ မလွတ်တာပေါ့။ စည်းကမ်းဖောက် လို့ ခံရတာ ခံ ပေါ့လို့ ပြောလိုက်ရင် ဒီလူ ကိုယ်ချင်းစာ တရားမရှိဘူးလို့ အထင်ခံရတာ။
ရဲတွေက လည်း လာတ်စားတာတွေပါတော့ လူတွေက ကိုယ့် အချင်းချင်းဘက် လိုက်ကုန်ကြတာကော ၊ သနားကြတာကောနဲ့။
ကျွန်တော် ဒာမြင်မှာ က စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူက လည်းထိန်းဘို့ မစဉ်းစား။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဘဲ မလိုက်နာတဲ့ သူတွေကို အားပေးနေတဲ့ပုံပါပေါက်နေတယ်လေ။
အဲ့ဒါ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု teamwork က စကားပြောသွားတာဗျ….
အစ်ကိုပြောတဲ့ မျဉ်းကြားဟောင်းမှာ ရဲမေလေးတွေ အချိန်ပြည့် ရှိမနေပါဘူးဗျာ..
တချိန်တုန်းက……..အဲ့သည်မှာ …အလံကိုင်ကားတားပြီး ..ကျောင်းသူကျောင်းသား အငယ်
လေးတွေ ကို လမ်းဖြတ်ကူး စေတဲ့ ဗော်လန်ဒီယာ အထက်တန်းကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်
မျဉ်းကြားအသစ်နေရာပြောင်းလိုက်တာတော့ ကျနော် မရှိတော့လို့ မသိတော့ဘူးဗျ ..
ဒါပေမယ့် သေချာတာက အဲ့သည့် နေရာမှာလည်းပဲ TTC ဘက်က ဂိတ်တံခါးတခုခုရှိတယ်ဗျ
ခုဟာက TTC ကလည်းဘဲ … မျဉ်းကြားဟောင်း ဂိတ်ကိုပဲ ဆက်ဖွင့်ပေးထားတယ်
ကျန်တဲ့ဂိတ်တွေကိုက လုံခြုံရေး ဘာညာ သာဒကာ အကြောင်းပြချက်နဲ့ပိတ်ထားတယ်..
ပြောသာပြောရတယ် အဲ့ဒါ TTC ဆိုတာထက် အောက်မြန်မာပြည် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနခင်ဗျ
(TTC ဆိုတာ …တခြားအခြေခံပညာ ကျောင်းတွေနဲ့ ကွာတဲ့အချက်က ..အခြေခံပညာဦးစီးဌာန
လက်အောက်ခံကျောင်း မဟုတ်ဘဲ အဆင့်မြင့်ပညာ ဦးစီးအောက်က BED နဲ့ တွဲကိုင်တဲ့ကျောင်းဗျ…)
အချို့သော infra တွေ BEDလား TTCလား မိခင်ဌာနလား ..သေချာမသိဘူးရယ်…
(မယုံရင် ပုစွန်ကွက်ကြော်သုတ် နာမည်ကျော်လှတဲ့ BED ကန်တင်းနောက်ဘက်က တထပ်တိုက်
စာသင်ခန်း အဆောက်အဦနီနီတွေ သွားကြည့်ကြည့်)
နောက်ပိုင်းတော့ TTC က အဲ့သည့် အဆောက်အဦတွေ အသုံးပြုခွင့်မရတော့ဘူးဗျ…
သည်တော့ …သည်လောက်ကျောင်းသားဦးရေ နဲ့ အဆောက်အဦ မလုံလောက်တာနဲ့
traffic jam ကို ရှင်းချင်တာနဲ့ ..ကျနော်တို့ မသိသော နောက်ကွယ်က အကြောင်းတရားများစွာနဲ့…
TTC ရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဟာ …အာရ်စီတူး ထဲရောက်ရပါရောလားဗျာ…
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးက ဆြာတွေ လာဖတ်သွားရင်လည်း …ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလေးလုပ်ပါဗျာ..
သံချေးတက်သော့ခလောက်တွေနဲ့ ပိတ်ထားတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ဂိတ်တွေ…
ကျောင်းသားဦးရေ ..ကားစီးရေ ….လမ်းပိတ်ဆို့မှု …ဒါတွေအားလုံးကို ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလိုနေနေပြီး..
ဒွေးလမ်း(ဆေး-၁နှင့် TTC ကြားကလမ်း) သည်၂ခုလေး အတွင်းမှာ စက်ဝိုင်းသဖွယ် လှည့်လည်နေကြရတာ
သိပ်တော့ မသင့်တော်ဘူးထင်တယ်ဗျ….(အ၀ိုင်း အစပ်က စံပြမူကြိုအပေါက်ကိုတော့ ထည့်မတွက်ထားပါ
ဘာကြောင့်လည်းဆို ကျောင်းကားတွေ မသုံးကြလို့ပါ…)
နောက်ဘက်က ထွက်ပေါက်က သထုံလမ်း နဲ့ ..အင်းယားလမ်း ပဲရှိတယ်…
သည်တော့ ရှေ့ဘက်က ထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ ပြည်လမ်းပေါ်ပဲ ….loadတွေ စုပုံနေတော့တာပေါ့…..
စည်ပင်ဘက်က လည်း …အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဘက်ကို ညှိနိုင်းရေးမှူးတွေ…ဘာတွေ
လွှတ်ပြီး plan ပြန် ချဖို့ကောင်းတယ်ဗျ…… ၀ိုင်းကြ၀န်းကြပေါ့ဗျာ…
ဟဲဟဲ ….တချို့ကိစ္စတွေကျ ဘယ်သူမှ ထောက်ပြစရာမလိုတဲ့ မွေးရာပါ …ညှိနှိုင်းရေးမှူးတွေ
မွေးဖွားပေးတဲ့ ဌာန မို့ပြောပါတယ်…
သိလို့ တတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ခံစားဖူးလို့…
ကျုပ်က TTCကျောင်းသား အိမ်ကလည်း ကျောင်းကားထောင်ဖူးတယ်..
ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း part-time ကျောင်းကားမောင်းဖူးတယ်..
ကျောင်းပြီးတော့လည်း …ဆေး-၁ ..လိပ်ခုံးမှာ ၂နှစ် စာသင်ဖူးတယ်…
ဆိုတော့ ဘွမှာ ၁၃နှစ်လောက် သည်နေရာမှာ ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ ချာတိတ်တယောက်ရဲ့အမြင်ကို
နည်းနည်း ခံစားနားလည် ထည့်သွင်း တွက်ချက်ပေးကြပါခင်ဗျား…
ထည့်မတွက်လည်း …အနှီ ကွန်ဆာဗေးတစ်ဗ် တွေအားလုံးကို
မီးဒုတ်…….မီးဒုတ်…….မီးဒုတ်…….မီးဒုတ်…….မီးဒုတ်…….ကွာ ….ငါ့လခွား ………